iPhone, iPad နဲ့ Mac apps တွေကို Market တစ်ခုတည်းမှာစုပေါင်းဖို့ အစီအစဉ်ဆွဲနေတဲ့ Apple! – AsiaApps
December 21, 2017 December 21, 2017 WilliamApp NewsNo Comment on iPhone, iPad နဲ့ Mac apps တွေကို Market တစ်ခုတည်းမှာစုပေါင်းဖို့ အစီအစဉ်ဆွဲနေတဲ့ Apple!
ပေါင်းစည်းမှုကြီးကို ၂၀၁၈ မှာထွက်ရှိမယ့် IOS နဲ့ macOS update မှာစတင်ပြီးတွေ့မြင်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ Mac App Store ကနေ Application တွေကို Download ဆွဲပြီးအသုံးပြုရတာနဲ့ Apple App Store ပေါ်က Download ဆွဲပြီးအသုံးပြုရတာက ခံစားမှုချင်းမတူညီပါဘူး။ အခု update ရဲ့ပေါင်းစည်းမှုကြောင့် App store ပေါ်က Application ကို Mac မှာ Download ဆွဲပြီးအသုံးပြုနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
Apple is said to have plan to combine iPhone, iPad and Mac apps https://t.co/Ft4dAb6IvP
— ETtech (@ETtech) December 21, 2017
Application တစ်ခုကို Mac, iPhone, iPad အစရှိတဲ့ Platform မတူညီတဲ့ device တွေမှာအသုံးပြုနိုင်တော့မှာဖြစ်တာကြောင့် Mac user တွေရော IOS user တွေပါအရင်ကနဲ့ မတူညီတဲ့ခံစားမှုမျိုးရရှိမှာအမှန်ပါပဲ။ အဓိကမတူညီတဲ့ ခံစားချက်ကတော့ အလုပ်မရှုပ်/အချိန်ကုန်သက်သာ တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ User တွေရဲ့ဘက်ကကြည့်တာပါ။
Developer တွေဘက်ကိုတစ်ချက် ကြည့်ပြန်ရင်လည်း ဒီ update က မမှားပြန်တာကိုတွေ့ရမှာပါ။ ပုံမှန် Application တစ်ခုကို Store ပေါ်မှာတင်တော့မယ်ဆိုရင် Apple Developer တွေက Mac App store နဲ့ Apple App store နှစ်ခုလုံးမှာ ကိုက်ညီအောင် Version နှစ်ခုဖန်တီးပေးရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Application တစ်ခုကို Version အကွဲတွေလိုက်ပြီးဖန်တီးနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ Application ကတစ်ခု၊ နှစ်ခုဆိုကိစ္စမရှိပေမယ့် အရမ်းများတဲ့အခြေအနေမှာဆိုရင်တော့ Developer တွေအနေနဲ့အရမ်းကိုအလုပ်ရှုပ်ရပါတယ်။
အဲ့တော့ လာမယ့် Update ကကျွန်တော်တို့ User တွေအတွက်သာမက Developer တွေအတွက်ပါ အထူးကောင်းမွန်လှတဲ့ Update သာဖြစ်ပါတယ်။ Application Developer တစ်ဉီးဖြစ်တဲ့ Steven Troughton-Smith က
လို့ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Application Developer ကိုယ်တိုင်ကတောင် ဒီ update က Apple’s software platform မှာကြီးမားတဲ့ပြောင်းလဲမှုကြီးဖြစ်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်တာကြောင့် ကျွန်တော်တို့ User တွေအနေနဲ့လည်းစိတ်ဝင်စားစွာစောင့်ကြည့်ရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။